နေးဗစ် LLC အကျိုးကျေးဇူးများ - ဗီဒီယိုအားသာချက်များကွန်ရက်မှကောက်ယူရရှိဖော်ပြပေး အခွားသောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်
နေးဗစ် LLC အားသာချက်များ & ဗီဒီယိုရှင်းလင်းချက်
တစ်ခုပိုင်ဆိုင်မှုစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းတူရိယာအဖြစ်အနည်းငယ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကာကွယ်မှုအပြိုင်နိုင်ပါတယ် ကမ်းလွန်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) သည်။ ဤရွေ့ကား, ပို. ပို. လူစည်ကားနယ်ပယ်တွင်အတွက်အနည်းငယ်ကမ်းလွန်နေရာများတွင်တစ်ဦးနေးဗစ် LLC ၏အားသာချက်များတူညီနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုမကြာသေးမီကပြင်ဆင်နှင့်ခိုင်ခံ့စေ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေပြဌာန်း။ ဒီတော့နေးဗစ် LLC တည်ထောင်သူလုံခြုံဖြစ်ကြပြီး spurious တောင်းဆိုမှုများကနေကာကှယျ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို သိ. များ၏စိတ်ကျေနပ်မှုကိုခံစား။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူတို့အမြော်အမြင်ရှိရှိတစ်နေးဗစ် LLC အဖြစ်မှတ်ပုံတင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးထွားလာရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုရှိသည်။
နေးဗစ် LLC အကျိုးခံစားခွင့်ပျေါလှငျ
ဒီနေရာမှာတစ်ဦးနေးဗစ် LLC ကမ်းလှမ်းအချို့ key ကိုအကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါတယ်။
တစ်ဦးကကြွေးရှင်တစ်ဦးထားရှိရမည် $100,000 တစ်နာဗိစ် LLC အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့အကျိုးစီးပွားနှင့်စပ်လျဉ်းလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုစတင်ရန်သိုက်။
တစ်ကြွေးရှင်အောက်ပါစကားမှန်သည်တစ်နာဗိစ် LLC အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဆန့်ကျင်နေတဲ့အားသွင်းနိုင်ရန်ရယူအောင်မြင်ကြောင်းမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ရပ်မှာတော့:
1 ။ ကြောင်းကြွေးရှင်မှဖြန့်ဝေပါစေရန်နေးဗစ် LLC ၏မန်နေဂျာမလိုအပ်ချက်ရှိပါသည်။ (ထို့ကြောင့်ကြွေးရှင်ငွေမရှိသောရရှိသွားတဲ့။ )
2 ။ အဆိုပါကြွေးရှင်ကို USA တွင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် - ထိုအားသွင်းနိုင်ရန်နှင့်အတူကြွေးရှင်အဆိုပါရှိပါတယ်ကတည်းက အခွင့်အရေး အဆိုပါဖြန့်ဝေခြင်းငှါ, ကြွေးရှင်ပေးဆောင်ရပါမည် အခွန် သူတို့အပျေါမှာ ... အဖြန့်ဝေသည့်ကြွေးရှင်ဖြစ်စေမ။ (အခွန် 77-137 အာဏာရ။ )
3 ။ တစ်နာဗိစ် LLC အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုဆန့်ကျင်တစ်ဦးကအားသွင်းနိုင်ရန်ပြီးနောက်ပျောက်ကွယ်သွား3အနှစ်.
အမိန့်အဓိပ္ပာယ်အားသွင်း - တစ်ဦးအားသွင်းနိုင်ရန်နှင့်အတူတစ်ဦးမြီစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု entity အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး (ပိုင်ရှင်) ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအားသွင်းနိုင်ရန်ကြောင့်ကြွေးရှင်ထိုကဲ့သို့သောကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကုမ္ပဏီ, LLC အဖြစ်ကုမ္ပဏီထံမှလုပ်ဖြန့်ဝေ, ပိုင်ခွင့်ပေးမယ့်တရားသဖြင့်စီရင်ကြွေးရှင်ကိုတရားရုံးထောက်ပံ့ငွေတစ်ဦးညာဘက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမြီစားအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး, လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်, ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း entity ၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်လိမ့်မည်။
နေးဗစ် LLC ဥပဒေရေးရာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်
တစ်ဦးကနေးဗစ် LLC ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်တစ်ဦးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ကွဲပြားဥပဒေရေးရာ entity ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကန့်အသတ်တာဝန်ယူမှုကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုမိတ်ဖက်များနှင့်တစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်းအကြားတစ်ဦးလက်ဝါးကပ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့သူကနှစ်ဦးစလုံးရဲ့အကောင်းဆုံးဝိသေသလက္ခဏာများကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ တစ်ဦးကနေးဗစ် LLC ကြီးမားတဲ့ကော်ပိုရေးရှင်း၏ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုအားသာချက်များရှိသည်။ Plus အား, ကသေးငယ်တဲ့မိတ်ဖက်များ၏အခွန်လွတ်လပ်ခွင့်ရရှိသွားတဲ့။ တစ်နာဗိစ် LLC ၏ဖွဲ့စည်းပုံအထူးသဖြင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည်။ ဒါကြောင့်အများအားဖြင့်အင်္ဂါတို့တွင်စာချုပ်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အင်္ဂါကိုတရားဝင်အပေါ်သို့သဘောတူသမျှမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
စနစ်တကျရေးဆွဲတစ်ဦးက နေးဗစ် LLC Operating Agreement ကို တစ်ကြွေးရှင် LLC သည်ဆန့်ကျင်နေတဲ့အောင်မြင်သောပြောဆိုချက်ကိုဆောင်တတ်၏သော (မဖြစ်နိုင်) ဖြစ်ရပ်အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတာဝန်ယူမှုအနေဖြင့်နာဗိစ် LLC အဖွဲ့ဝင်များကိုကာကွယ်ရန်အပိုဆောင်း verbiage ပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ရုပ်ပွားတော်တစ်နေးဗစ် LLC, အစဉ်ပိုင်တခါသာကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက် reserved ခဲ့တဲ့အခွအေနေတည်ရှိရန်ခွင့်ပြုသည်။ အဖွဲ့ဝင်များသူတို့ကိုယ်သူတို့အကြားသို့မဟုတ်အပြင်ဘက်ကျွမ်းကျင်သူများငှားရမ်းခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း, LLC သည်ကို run ဖို့မန်နေဂျာရွေးကောက်တင်မြှောက်နိုင်ပြီး, သူတို့သဘောတူညီချက်၏စည်းကမ်းချက်များအောက်မှာ LLC သည်၎င်းတို့၏အကျိုးစီးပွားလွှဲပြောင်းရန်အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။
တစ်နာဗိစ် LLC ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖွဲ့စည်းပုံအဖွဲ့ဝင်များကတခုခုဖြစ်နေတာကြောင့်မလိုလားအပ်တဲ့စစ်ဆေးရေး၎င်းတို့၏လှုပ်ရှားမှုများအောက်မပါဘဲသူတို့လုပ်ကိုင်ရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏လက်တွေ့မဆိုနယ်ပယ်တွင်ပြောင်းလဲနေတဲ့စျေးကွက်အခြေအနေများလျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါဟာကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာမဆိုထံမှပိုင်ရှင်တွေရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးကလူတစ်ဦးတွင်ထိန်းချုပ်မန်နေဂျာနှင့်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး, ပိုင်ဆိုင်မှုမပါဘဲရုံထိန်းချုပ်မန်နေဂျာ, ဒါမှမဟုတ်ပဲအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီ entity ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အဖြစ်ကောင်းစွာအခွန်၏ဧရိယာသက်ဆိုင်သည်။ အမေရိကန်အဖွဲ့ဝင်အများဆုံးမကြာခဏ IRS ကို 8832 အခွန်ပုံစံဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံခြားမှတ် entity သို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားမိတ်ဖက် status ကိုရွေးကောက်တင်မြှောက်ရန်အကြံပြုပါသည်။ အသိပေးထားသော CPAs အမေရိကန် LLCs default အနေဖြင့်ဒီအခွန် status ကိုခံယူပေမယ့်နိုင်ငံခြား LLCs ဝါး proprietorship သို့မဟုတ်မိတ်ဖက်အခွန် status ကိုလက်ခံရရှိရန်ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်း၎င်းတို့၏ clients များပြောပြပါ။ နိုင်ငံခြားရေး LLCs default အနေဖြင့်နိုင်ငံခြားကော်ပိုရေးရှင်းအဖြစ်အခွန်ကောက်နေကြသည်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးအမေရိကန် LLC ကဲ့သို့ကမ်းလွန် LLC ပတျဝနျးကငျြအခှနျအထုံးအဖွဲ့တို့ကိုအလားတူအခွန်ရွေးချယ်စရာပျော်မွေ့။
နေးဗစ်ဟိုတယ် Grounds သို့
သငျသညျကိုအောက်တွင်ဖတ်ပါလိမ့်မယ်အဖြစ်, နေးဗစ်ရုံတစျခုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့်အတူတည်လိမ့်တစ်ခု LLC ခွင့်ပြုထားသည်။ ဒီရောင်စဉ်၏အခြားအဆုံးတွင်တစ်နာဗိစ် LLC ရှိနိုင်ပါသည်အဖွဲ့ဝင်အရေအတွက်မျှမကန့်သတ်ရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ပိုင်ရှင်-အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးချင်းစီကန့်သတ်မထားပါ, သူတို့မူလအမြစ်ကို, ကိုကိုး စား. , ဒါမှမဟုတ်ပင်ကော်ပိုရေးရှင်းနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးကနေးဗစ် LLC လည်းအခြားကုမ္ပဏီများ, (အခြားကုမ္ပဏီအတွက်) ကိုယ်ပိုင်ရှယ်ယာ, အိမ်ခြံမြေ, ဘဏ်အကောင့်များနှင့်အခြားမြင်သာထင်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့စီးပွားရေးမိတ်ဖက်ထဲသို့မဝင်ရအခမဲ့ဖြစ်ပြီး, တောင်ကိုးစားတဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ရှိစေသတည်း။ နေးဗစ် LLC ဖန်တီးသူသူတို့နေးဗစ် LLC ကဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်အဘို့ရည်ရွယ်ချက် embody ထွက်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်သူကဆက်ပြောသည်အာမခံချက်ပေးခြင်း, ယင်း၏အဖွဲ့ဝင်အခြေစိုက်စခန်း၏ဇာတ်ကောင်များနှင့်ဖွဲ့စည်းမှုပုံဖော်အတွက်အခမဲ့အပ်နှံပေးအပ်ထားတယ်။
နေးဗစ် Four Seasons ဟိုတယ်၌
နေးဗစ် LLC ဥပဒေများ တရားဝင်တစ်နေးဗစ် LLC ထူထောင်ရန်တစ်နေးဗစ်မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်, တစ်ဦးတည်းသောတစ်ဦးချင်းစီခွင့်ပြုသည်။ single-အဖွဲ့ဝင် LLC ခုနှစ်တွင်ပိုင်ရှင်-အဖွဲ့ဝင်ကုမ္ပဏီအားလုံးကိုအကျိုးစီးပွားရရှိထားသူများနှင့်အကျိုးဆက်ကုမ္ပဏီ၏ကျော်ပြည့်စုံထိန်းချုပ်မှုလေ့ရှိသည်။ သူသို့မဟုတ်သူမ LLC သည်၏ညှနျကွားနှငျ့ပတျသကျသောကိစ္စရပ်များအပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်များစေသည်။ ဤသည်အထဲတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစားတစ်ခုကိုထဲသို့ဝင်နိုင်ပါသည်စာချုပ်များ, ပိုင်ဆိုင်မှုဖြန့်ဖြူးနှင့်အခြားအလားတူပြဿနာများကိုပါဝင်သည်။ တစ်ဦးက Single-အဖွဲ့ဝင် LLC မသာသင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုကာကွယ်ပေးသည်, ကလည်းသူတို့ကိုသင်ကျော်တစ်ဦးတည်းသောအခွင့်အာဏာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ကြောင်းသေချာ။
single-အဖွဲ့ဝင် LLC များအတွက်ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုနေးဗစ် LLC တစ်ရိုးရှင်းပြီးအကြီးအကျယ် Uncomplicated တာဝန်ထ setting ကိုမှန်ကန်စေသည်။ ကျွန်းပေါ်တွင်မျိုးစုံ-အဖွဲ့ဝင် LLCs နှင့်ဝသကဲ့သို့, single-အဖွဲ့ဝင် LLC အဘို့အဘယ်သူမျှမအစီရင်ခံ, စာရင်းစစ်, ဒါမှမဟုတ်စာရင်းကိုင်လိုအပ်ချက်များကိုရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်ပိုင်ရှင်-အဖွဲ့ဝင်နေဆဲရက်ရက်ရောရောအခွန်အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားရန်ရရှိသွားတဲ့။ Plus အား, သူတို့ကသောကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအတွက်နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ငြိမ်ဝပ်စွာနေလို့ရပါတယ် နေးဗစ်ယုံကြည်မှုဥပဒေပြဌာန်း ကျွန်းပေါ်မှာရှိသမျှမှန်မှန်ကန်ကန်-ထူထောင် LLCs ဖို့ကိုတိုးချဲ့။
လူသိရှင်ကြားတစ်နေးဗစ် LLC ကို set up ဖို့တင်သွင်းဖြစ်ကြောင်းစာရွက်စာတမ်းများအဖွဲ့ဝင်မဆိုများ၏အမည်များဆံ့မခံကြဘူး။ ထို့ကြောင့်အစီအစဉ် privacy ကိုပိုကောင်းစေပါတယ်။ တစ်ဦးကနေးဗစ် LLC က၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်မဆို၏အထောက်အထားတွေကိုတစ်ပုံစံတင်ပို့ရန်ထုတ်ဖော်မလိုအပ်ပါဘူး။ (ထိုကဲ့သို့သောဖြည့်စွက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသို့မဟုတ်မြို့တော်တိုးပွားလာသို့မဟုတ်လျော့ကျလာအဖြစ်) ကိုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုဖွဲ့စည်းမှုမှမဆိုအပြောင်းအလဲများနှင့်မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်မှတဆင့်ကိုင်တွယ်လျက်ရှိသည်။ အဖွဲ့ဝင်အမည်များအဖွဲ့အစည်းများ၏ဆောင်းပါးများမဆိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထဲမှာပေါ်လာပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ဦးအဖြစ်လျာထားသော၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုရယူရန်မလိုအပ်ရှိပါသည်။ ဖြစ်နိုင်သမျှအနာဂတ်စိစစ်ဖို့သူတို့ကိုယ်သူတို့ဖော်ထုတ်မပါဘဲ၎င်းတို့၏နေးဗစ် LLC သုံးပြီးဥပဒေရေးရာ, ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစစ်ဆင်ရေးထွက်သယ်ဆောင်ရန်ဆန္ဒရှိသူကိုတစ်ဦးချင်းစီတစ်ဦးနေးဗစ် LLC ၏အမည်ဝှက်သူတို့ကို့ပြုပါကကူညီလိမ့်မည်ဟုတှေ့လိမျ့မညျ။
တစ်နာဗိစ် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း (ထိုကဲ့သို့သောနေးဗစ်၌အကြှနျုပျတို့၏အဖှဲ့အစညျး၏အေးဂျင့်ရုံးကဲ့သို့) မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်များ၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုလိုအပ်သည်။ ဤသည်လိုင်စင်ရလူတစ်ဦးတစ်ဦးနေးဗစ်နေထိုင်သူသို့မဟုတ် ရရှိ. ယုံကြည်မှုသို့မဟုတ် LLC-related န်ဆောင်မှုများတစ်ခုလုံးကိုအကွာအဝေးများကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်တရားဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း entity ဖြစ်ရမည်။ နေးဗစ် LLC ဥပဒေပြဌာန်း ထို့အပြင် paid-in ကို $ 500,000 ၏မြို့တော်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း entity မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်အဖြစ်လုပ်ကိုင်ဖို့လိုင်စင်ထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်ရှေ့တော်၌နိမ့်ဆုံးလိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကလိုင်စင်သာတစ်ဦးချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီရဲ့အသိပညာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သမာဓိရှိစမ်းသပ်တဲ့ဂရုစိုက်ခြင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံဆောင်မှုများကိုစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးထုတ်ပေးနေပါတယ်။
သာမှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့် LLC အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသို့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်များ၏ဝိသေသလက္ခဏာသိတယ်။ သို့သော်သူတို့ရည်ရွယ်ချက်၏အလွန်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အားဖြင့်အခြားပါတီနှင့်အတူဤသတင်းအချက်အလက်မျှဝေခြင်းမှကာကွယ်နေကြပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအကြမ်းဖက်ဝါဒသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးလူကုန်ကူးမှု၏လုပ်ရပ်များအဖြစ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသို့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အပေါ်လေးနက်ပြစ်မှု၏ irrefutable သက်သေအထောက်အထားများနှင့်အတူတင်ပြသည့်အခါသင်တန်း၏ဤမှရှားပါးချွင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။
တရားစွဲဆိုမှု Shield ကို
လက်တွေ့အဘယ်သူမျှမကမ်းလွန်တရားရုံးတွင်အလိုအလျှောက်အနေနဲ့ LLC သို့မဟုတ်စနစ်တကျင်း၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အတွင်းတည်ထောင်ခဲ့သည်တစ်ဦးယုံကြည်မှုကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့နိုင်ငံခြားတရားရုံးများ၏တရားသဖြင့်စီရင်ပြဋ္ဌာန်း။ နေးဗစ်တရားရုံးများမျှကွဲပြားခြားနားပါသည်။ တစ်နာဗိစ် LLC ဆန့်ကျင်နေတဲ့ပြောဆိုချက်ကိုဆောင်ခဲ့တစ်ဦးကကြွေးရှင်တစ်ဦးနေးဗစ်တရားရုံးရှိသူ၏သို့မဟုတ်သူမ၏အမှုတင်ပြခြင်းနှင့်လိုက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ယင်းကြောင့် ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေများ ပြင်းပြင်းထန်ထန်နေးဗစ်အတွက်ပြဌာန်းထားပါသည်, ဤသည်သင်၏ပြိုင်ဘက်ဖို့အတော်လေးတစ်ခုစျေးကြီးခံဝန်ဖြစ်သက်သေပြနိုင်ပါတယ်။ အတူစတင်တစ်ဦးမြီရှင်များ၏ပေါင်းလဒ်ငွေသွင်းရပါမည် ယင်းနေးဗစ်တရားရုံးများနှင့်အတူ $ 100,000 မည်သည့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုယူနိုင်ပါသည်မီ။
လျော်ကြေးကိစ္စများတွင်လိုက်ရှာတဲ့အခါမှာအများအပြားကိုအမေရိကန်ရှေ့နေတွေမထို့အပြင်နေးဗစ်ရှေ့နေများတစ်ဦးအရေးပေါ်အခြေခံပေါ်မှာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ တစ်ဦးကတောင်းဆိုသူတစ်ဦးနေးဗစ်ရှေ့နေပင် client ကဲ့သို့သူ့ကိုသို့မဟုတ်သူမ၏ယူပြီးစဉ်းစားမည်ရှေ့မှာမမျှတပေါင်းလဒ်ကိုတက်အောက်ဖော်ပြပါများမှမှရပါလိမ့်မယ်။ ဤသူကားကိုသတိပြုပါ ထိပ်ပေါ် အဆိုပါ $ 100,000 တောင်းဆိုသူတရားရုံးရှိသူ၏သို့မဟုတ်သူမ၏အမှုဆုံးရှုံးသင့်တယ်တရားရုံးစရိတ်နှင့်အခြားကုန်ကျစရိတ်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်အသုံးပြုလိမ့်မည်ဖြစ်သောအစောပိုင်းဖော်ပြခဲ့တဲ့။
ဤရွေ့ကားပမာဏပင်ရုံးတင်စစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်းလေယာဉ်ခ, တိုးချဲ့ဟိုတယ်တည်းခိုကိုဖုံးလွှမ်းကြဘူး, ဝင်ငွေဆုံးရှုံးခဲ့ရနှင့်မြီရှင်ပခုံးလိမ့်မယ်အခြား Out-of-အိတ်ကပ်ကုန်ကျစရိတ်။ တစ်နာဗိစ်တရားရုံးတစ်နေးဗစ် LLC ဆန့်ကျင်နေတဲ့ပြောဆိုချက်ကိုလိုက်စားကာစျေးကြီး option တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အကြောင်းပဲသူတို့ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုတွန်းအားပေးကနေအများဆုံးအကြွေးတားဆီးရန်ရန်လုံလောက်သောဖြစ်နိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေးဗစ် Affiliate ရုံးထံမှဓာတ်ပုံ
တစ်နာဗိစ်တရားရုံးတစ်ခု LLC ဆန့်ကျင်တဲ့ကိစ္စ mounting များ၏စရိတ်အလုံအလောက်မပါလျှင်သည်အတိုင်း, တရားရုံးများကိုလည်းနာဗိစ် LLC ဆန့်ကျင်ယူဆောင်မည်သည့်ကိစ္စတွင်အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းလိုအပ်ချက်စည်းကြပ်။ လက်ရှိနေးဗစ်ဥပဒေများရှင်းလင်းပြတ်သားနေသောခေါင်းစဉ်: သာနာဗိစ် LLC တစ်တရားစွဲဆိုမှုအတွက်တရားခံအဖြစ်အမည်ရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးကအမှုအမည်မြီစား-အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကိုချက်ချင်းပယ်ချလိမ့်မည်တဲ့နေးဗစ်တရားရုံးမရောက်မီဆောင်ခဲ့လေ၏။ ဒီသတိထားမိသောသူတစ်ဦးကတောင်းဆိုသူ, သင်တန်း, တစ်ဦးနေးဗစ် LLC ဆန့်ကျင်သူသို့မဟုတ်သူမ၏တရားစွဲဆိုမှုအတွက်မြီစား-အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏အမည်ကိုချန်လှပ်နိုင်ပါတယ်။ တဦးတည်းပင်ဝတ်စုံအတွက်သူ့ကိုသို့မဟုတ်သူမ၏အမည်ကိုမနိုင်ကတည်းကသို့သော်ဒါလုပ်နေတာတစ်ဦးမြီစား-အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုအပြီးမသွားပါကနှစ်ထပ်ကွမ်းခက်ခဲစေသည်။
ဒါဟာကြွေးရှင်တစ်ဦးနေးဗစ် LLC အတွက်မြီစား-အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဆန့်ကျင်နေတဲ့အားသွင်းနိုင်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းဖြစ်ပျက်နိုင်ဘူး။ အထက်ပါအခက်အခဲများပေးပေမယ့်, ဒီဟာအလွန်အမင်းမဖြစ်နိုင်ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ဤဖြစ်ပျက်ပါဘူးသောဖြစ်ရပ်၌, အားသွင်းနိုင်ရန်အတွက်မြီရှင်သာ LLC အတွက်အထူးသဖြင့်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့အကျိုးစီးပွားကနေဖြန့်ချိခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏။ သို့သော်ကကြွေးရှင်ကြောင်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမှမဆိုဖြန့်ဝေစေရန် LLC သည်အဖွဲ့ဝင်များကအတင်းဖို့ခွင့်ပြုမထားဘူး။ ဒါကြောင့်အဖြစ်မှန်ထဲမှာ, ကြွေးရှင်ဘာမျှရတဲ့အထိအဆုံးသတ်ထားသည်။ တနည်းအားဖြင့်အခြားအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်မည်သည့်ဝင်ငွေသို့မဟုတ် LLC သည်၏အခြားပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုများမှပေါ်ပေါက်အကျိုးစီးပွားများ၏အကျိုးစီးပွားအတွက်အားသွင်းနိုင်ရန်၏အတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်ဖြစ်ကြသည်။ LLC သည်မန်နေဂျာကမြီစား-အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုတစ်ဦးဖြန့်ဝေပါစေမပါဘူးဆိုရင်နောက်တဖန်သည်, ကြွေးရှင်, လက်တစ်ခက်-အနိုင်ရခဲ့အားသွင်းနိုင်ရန်ရှိနေသော်လည်းလက်ချည်းလွှတ်လိုက်လိမ့်မည်။
တစ်ဦးအားသွင်းနိုင်ရန်လက်တွေ့ကျကျတစ်နေးဗစ် LLC ၏အကျိုးစီးပွားနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဆန့်ကျင်ယင်းကိစ္စအငြင်းပွားပတ်သက်နေရရှိနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောပြန်လည်ကုစားဖြစ်သော်လည်း၏တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းများအလငျး၌အားနည်းကြွေးရှင်သည်ကိုးကွယ်ရာဖြစ်နေဆဲ နေးဗစ် LLC ဥပဒေများကို။
ရှင်းနေသည်မှာအတော်ကြာအားသာချက်များအနာဂတ်အကြွေးမှသင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ့်နေးဗစ် LLC တက် setting ထဲမှာရှိပါတယ်။ သင်တစ်ဦးတည်းသို့မဟုတ်လူမျိုး၏မည်သည့်အရေအတွက်ကိုနှင့်တသားတကို set up နိုင်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အခြေခံအုတ်မြစ်နှင့်အတူပင်ဖက်တက်လို့ရတယ်။ တစ်ဦးကနေးဗစ် LLC သင်တစ်ဦးကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်း (ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှု) ၏အကျိုးကျေးဇူးများအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်လက်တွဲ (အခွန်လွတ်လပ်ခွင့်) အသီးအနှံကိုရိတ်ရပေးနိုင်ပါတယ်။ Plus အား၎င်း၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာသင် operate ဘယ်မှာလက်တွေ့မဆိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်တစ်ဦးခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့ကစားသမားစေသည်။ စနစ်တကျသင့်ရဲ့နာဗိစ် LLC ကို set up နှင့်နေးဗစ်တရားရုံးလိုအပ်ချက်များကိုနာမည်ဆိုးစျေးကြီးခြင်းနှင့်တင်းကျပ်သောဖြစ်ကြသည်ကတည်းကသင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်စီးပွားရေးလက်တွေ့ကျကျ, တောင်းဆိုမှုများဆန့်ကျင်ကာကွယ်ပေးနိုင်နေကြသည်။ ထိုအခါ Piece က de ခုခံတွန်းလှန်? သင်သည်သင်၏နာဗိစ် LLC သင်တို့အဘို့ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းပြည့်စုံ privacy ကိုအတွက်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပျော်မွေ့ရ။ ဟုတ်ကဲ့, အသက်ရှင်ခြင်းကိုချိုမြိန်စေနိုင်ပါတယ်!